तपाईको प्रेम सम्बन्ध कति बलियो छ भनेर यसरी पत्ता लगाउनुहोस् ﻿ - Tripura Sanchar
हामीलाई समयसमयमा आफ्नो प्रेम सम्बन्ध कति मजबुत छ भनेर जाँच्न मन लाग्छ । तर, हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि- हाम्रो सम्बन्ध सही दिशातिर गइरहेको छ कि छैन भनेर ? सम्बन्धको गहिराई र मजबुतीका आधार के हुन् त ? कसरी थाहा पाउने कि- मैले खोजिरहेको मान्छे यही हो भनेर ?
आउनुहोस् ! ब्राइटसाइडको सहयोगमा हामीले केही यस्ता विशेषताहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं । जसको सहयोगमा तपाईले आफ्नो प्रेम सम्बन्धक कति बलियो छ भनेर सजिलै पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रेम सम्बन्ध बलियो छ-छैन भनेर थाहा पाउने १० आधारहरूः
तपाई आफ्नो पार्टनरसँग भविष्यका योजनाहरूबारे सजिलै कुरा गर्न सक्नु ।
तपाईहरूबीच गरिएका बाँचाहरू अक्सर झुटा नहुनु ।
एक-अर्कालाई आफ्नो नियन्त्रणमा नराखी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु ।
तपाईहरूबीच एक-अर्काको मनको कुरा बुझ्न नाटक गरिराख्नु नपर्ने ।
एक-अर्काप्रति तपाईहरू सबैको सामु खुलेर गर्व गर्नु ।
स-साना असमझदारीलाई धेरै ठुलो विषय नबनाएर एक-अर्कासँग माफी माग्नु ।
एकले अर्काको विश्वास पूर्ण रुपले गर्नु ।
आफ्नो पार्टनरबारे अरुसँग गुनासो नगर्नु ।
एकले अर्कालाई अनावश्यक चासो दिदैं सबैकुरामा बदल्न नखोज्नु ।
कुनै पनि गल्तीको दोष अर्कोलाई नथुपार्नु ।
यीमध्ये कुन-कुन कुराहु तपाईहरूको सम्बन्धमा छन् ? या यी भन्दा पनि थप केही कुरा छन् जसले सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ? केही भए कमेन्टमा लेख्नुहोला ।
Previous articleरुकुम (पश्चिम)को आठविसकोट नगरपालिकामा १२ शैयाको आइसोलेसन कक्ष बन्दै ।।
Next articleक्रान्तिकारी माओवादीले भन्यो, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर